Mamiriro Ekutumira - Network maRadio
musha / Mamiriro Ekutumira
Reg. Aihwa. PT514139625
Zvese zvigadzirwa zvatinonyora muwebhusaiti yedu zvinotumirwa zvakananga kubva kune vanogadzira kana vatapi vedu vanobva kuHong Kong.
Kutumira nguva kunoenderana nekwekuenda. Tinogona kushandisa DHL Express iyo inotora mazuva anosvika manomwe kusvika masere kana maSingapore Postal Services ayo anogona kutora zvishoma zvishoma, kazhinji, pasuru yacho inosvika mukati memazuva gumi nemaviri. Kutumirwa kunogona kunge kuri pasi petsika.
Dhirivhari mitengo inosiyana zvichienderana nehuremu hwechinhu chakasarudzwa, dhirivhari yebasa uye nyika yepositi. Mutengo uchaverengerwa panguva yekutarisa kana dhata rekutumira rapinda.
Yakazara yekutevera inowanikwa kuburikidza neemail pane kutumira.
Nguva dzese dzekutakura dzinotaurwa mumazuva ekushanda (Muvhuro - Chishanu).